DOWNLOAD De Havilland DHC-3 Otter Ng FS2004 - Rikoooo
အရွယ် 20.9 ကို MB
downloads ရယူရန္ 8 078
Author: Heugene Heyart
ဤတွင်အနာဂတ်လွန်သောရေယာဥ်ပျံဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာကစိတ်ကူးယဉ် "ရှေ့ပြေးပုံစံ" ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အလွန်အလားအလာဖြစ်နိုငျသညျ! အလွန်ကောင်းသောအသံများကို, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏ကြီးမားသောရှေးခယျြမှု, မော်ဒယ်အရမ်းသပ်ရပ်။ ကကြိုးစားရမယ်! ထို့ပြင် "Otter" (ပြင်သစ်, "ဖျံ") လို့လူသိများတဲ့အက de Havilland ကနေဒါ DHC-3 တစ်ခု monoplane ဖြစ်ပါတယ်။